प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जालसाझीपूर्ण अधिकारको प्रयोग गरे : संविधानविद् आचार्य- समाचार - कान्तिपुर समाचार
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जालसाझीपूर्ण अधिकारको प्रयोग गरे : संविधानविद् आचार्य
अध्यादेश कानुनविपरीत : ज्ञवाली
काठमाडौँ — संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जालसाझीपूर्ण अधिकारको प्रयोग गरेर अध्यादेश जारी गरेको बताएका छन् ।
'सरकारको अर्को महाभूल भयो । महाआपत्तिजनक कुरा हो । संविधानका यस्ता व्यवस्थाहरू र सरकारका कामलाई क्रियाप्रतिक्रियाको रूपमा, इगोको रूपमा लिने भन्ने विषय नै होइन । एउटा घटनाले भोलि संविधानका नजिर स्थापित हुन्छन्,' आचार्यले भने, 'कस्तो खालको मूल्यमान्यताको संवैधानिक व्यवस्था हामीले चाहेको हो ? त्यो कुरामा यसले असर गर्छ । सभामुख गएनन् । त्यो आपत्तिको विषय हो । त्यसको बदलामा सरकारले जुन जवाफ दियो अध्यादेश ल्याएर त्यसले झन ३-४ वटा गम्भीर प्रश्न ल्यायो र संविधानको उल्लंघन गर्‍यो ।'
'अध्यादेश खारेज भयो भने पनि नियुक्ति बदर हुँदैन । दीर्घकालको रूपमा यति ठूलो असर पर्ने विषयमा सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख दुईवटा मिलेर यो खालको काम गर्दै जानुभयो भने अवस्था के हुन्छ ? यसलाई हामी संविधानमाथिको जालसाझी र जालसाझीपूर्ण अधिकारको प्रयोग भन्छौँ, जुन त्रुटिपूर्ण छ,' आचार्यले भने । सरकारको निर्णयले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको उनले बताए।
त्यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश कानुनविपरीत रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विधायिकाको मनसा अनुसार संसद्ले बनाएको कानुन हुँदाहुँदै त्यसमा उल्लेखित व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको पुष्टिबिना नै अध्यादेश ल्याउनु विधिको शासनविपरीत भएको उनले दाबी गरे । उनले भने, 'संसद्ले पारित गरेको ऐन छ । त्यो ऐन त विशेष ऐन हो नि । विशेष ऐनलाई नै विस्थापन हुनेगरी अध्यादेशबाट ल्याउँदा विधिको शासन अनुसार हुन सक्दैन ।'
'परिषद्‍मा सबै अंगका प्रमुख भएपछि संवैधानिक अंगमा आएका मान्छेहरू विशेष ज्ञान भएका र दक्ष जनशक्ति आउन भन्ने नै हो । बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने भनेपछि अन्य अंगका प्रमुखलाई बाइपास गर्नसक्ने अवस्था हुने भयो । यो निर्णय न्यायीक पुनरावलोकनको घेराभित्र पर्छ,' ज्ञवालीले भने ।
प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ २२:३१
जुम्ला विमानस्थल विस्तार गरिँदै
मंसिर ३०, २०७७ एलपी देवकोटा
जुम्ला — सदरमुकामस्थित जुम्ला विमानस्थल विस्तारको लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । प्रदेश राजधानी सुर्खेतपछि दोस्रो ठूलो सहर जुम्लाको विमानस्थल विस्तारका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सर्भेलगायतको कामलाई तीव्र बनाएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि वहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा विमानस्थल विस्तारको काम सुरु हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । जुम्ला विमानस्थल कर्णालीका हिमाली जिल्लामा सबैभन्दा सहज विमानस्थल मानिएको छ । सबैभन्दा बढी चाप पनि भएको भन्दै विमानस्थल विस्तारका लागि संघीय सरकारले यो वर्ष १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारको सेयर लगानीमा धावनमार्ग विस्तारका लागि अध्ययन भइरहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, जुम्लाका प्रमुख महेन्द्रबहादुर सिंहले बताए । उनका अनुसार विस्तृत अध्ययनका लागि यो वर्ष १७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्राधिकरणको आफ्नै स्रोतबाट विमानस्थलमा ‘फायर सेड’ निर्माणको काम गत वर्षदेखि भइरहेको उनले जानकारी दिए । सर्भेको क्रममा डोनबाट पनि सर्भे गरिएको उनको भनाइ छ ।
जुम्लाबाट जहाजमा यात्रा गर्ने यात्रुको चाप बढ्दै गएकाले लामो समयदेखि विमानस्थल विस्तारको माग गरिएको चन्दननाथ नगरपालिका प्रमुख कान्तिका सेजुवालले बताइन् । ‘लामो प्रयासपछि विमानस्थल विस्तारको कामले गति लिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब जुम्लाबासीको हवाइयात्रा सहज र गुणस्तरीय हुनेछ ।’
जुम्ला विमानस्थलमा अहिले १६ सिटे जहाज अवतरण हुने गरेका छन् । अहिले सीता, तारा र समिट एयरलाइन्सका साना जहाज चलिरहेकोमा विमानस्थल विस्तार भएपछि अन्य निजी कम्पनीका ठूला जहाज चल्ने आशा गरिएको स्थानीय कमल देवकोटाले बताए ।
प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ २१:३५